ကြာညို့ဘားကပီးစာ(၁) - Rakharazu
Rakharazu > ဆောင်းပါး > ကြာညို့ဘားကပီးစာ(၁)
ယေဒါလေ့သင့်အခုတလောစာဖတ်ရလွန်းအားကြီးလို့ မျက်စိစေ့ကေချေကိုက်ရေ။ကိုအဆိုးသျှေစိတ်မပူလီကေ့နှန်း။ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်ရာစိတ်ချလက်ချဆက်လုပ်ပါ။
ယောက်ခမအိမ်ကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်တတ်နီဗျာလ်။ကိုအဆိုးသျှေအိမ်ကထွက် မလားခင်တစ်ညိဉ့်ကမွီးထားရေယက်သဲ့ညိုသမီးလေ့ဒေါက်ဒေါက်နန့်လမ်းလျှောက်တတ်လို့ မပီကလာ ပီကလာစကားတိကိုကကောင်းပြောတတ်နီဗျာလ်။ ကိုအဆိုးသျှေကိုယ်တိုင် စိုက်ခရေ နောက်ဖေးခြံထောင့်က ဂေါ်ရံနီပင်တောင်သီးနီဗျာလ်…. ။
ဇာမပြော ညာမပြော အိမ်ကထွက်လားပြီးကေ ဇာကိုပေါက်လို့ ဇာကိုရောက်မှန်းမသိရေ ကိုအဆိုးသျှေအတွက် ကြာညို ဇာလောက်ပူဆွီးသောကရောက်ရစွာ ကြာညို အသိဆုံးရာ။ သူခိုးအမိ မငိုနိုင် ဆိုရေပိုင် ကိုယ့်အပူလုံးကိုယ်မျိုချပြီး နီခရစွာ ကိုအဆိုးသျှေဘားက လူကြုံနန့်ထည့်ပီးလိုက်ရေ စာနန့် ဓါတ်ပုံကိုတွိရေခါမှ ကြာညို ခံစားနီရရေ ပန်းနာရင်ကျပ်
ချစ်သူပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါသည် ကိုဂရုမစိုက်ဘဲလုပ်ရက်လီခြင်း၊ ရက်စက်လီခြင်းလို့ ရင်ထုမနာဖြစ်ခရစွာ အဂုဆိုကေ ကိုအဆိုးသျှေတစ်ယောက်ပဇာအတွက်ကြောင့် ချစ်သူအနားကထွက်လားရစွာ ကြာညို ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လိုက်ဗျာလ်။ ကိုအဆိုးသျှေလုပ်ရပ်မှန်ပါရေ။ ကိုအဆိုးသျှေအီးယောင်မွီးရကျိုးနပ်ရေပိုင်ကြာညိုလေ့ လူရွီးစွာမှန်ရေလို့ လုံးဝယုံကြည်လိုက်ဗျာလ်။ကိုအဆိုးသျှေခန္ဓာထဲမှာအဖိုးသျှင်၊ အဖီးသျှင်ရို့၏သွီး၊ကိုအဆိုးသျှေအဘာ၏သွီးတိ စီးဆင်းနီရေလို့လေ့ ကြာညို လုံးဝယုံကြည်လိုက်ဗျာလ်။ ယပြီးကေပိုလို့လေ့ချစ်မိလာရေ။အဂုအချိန်ထိ ကိုအဆိုးသျှေအပါ် ထားခရေကြာညို့ချစ်ခြင်းမိတ္တာနန့်သစ္စာတရားတိစွာလေ့အရင်အတိုင်းသိမ့်ပါရာကိုအဆိုးသျှေ။
မွီးရေခါကပင် ကျန်းမာရီးချူချာတတ်လို့ ပိုးမွီးရေပယှောင် စုပ်တသတ်သတ်နန့် မွီးစပ်လာရပနာ ဆီးခန်းနန့်် အိမ်ကို မြောင်းပေါက်အောင်လားခရပြီးသီမင်းလက်ထဲက အကြိမ်ကြိမ်လုယူခရရေကိုအဆိုးသျှေ။ အဂုဆိုကေဓါတ်ပုံထဲမှာကျန်းကျန်းမာမာ နန့် အရပ်တိရှည်ဗျာလ်အသားတိပြည့်လို့တွိရပနာရက္ခိုင့်တပ်မတော်ဘက်တံဆိပ်စစ်သား ယူနီဖောင်းနန့်ကျက်သရီတင့်တယ်နီရေကိုအဆိုးသျှေကိုမြင်ရလို့ ကိုအဆိုးသျှေရို့အိမ်မှာ ချိတ်ဆွဲထားရေယောက္ခထီးကိုသတိရမိရေ။အချေဘဝက အဖိုးသျှင်၊ အဘောင်သျှင်ရို့ရင်ခွင်မှာ ခြီမွှီးမီးမလောင်၊လက်မွှီးမီးမလောင်ကြီးပြင်းလာရေကိုအဆိုးသျှေစွာဂုအချိန်မှာအဖ ရက္ခိုင်နိုင်ငံတော်က အားကိုးလောက်ရေမျိုးချစ်တော်လှန်ရီးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်နီလို့ ကြာညိုကကောင်းကျေနပ်တေ။လောကနီတိထဲမှာမိမ်ိနိုင်ငံ နန့်လူမျိုးကိုချစ်တေအချစ် ထက်မြင့်မြတ်တေ အချစ်မရှိလို့ဆိုထားရေမနား။ယေဒါလေ့သင့်ကြာညို့ကိုတော့ဒေအချစ် ထက်ပိုလို့ချစ်ရဖို့နှန်း။
ရက္ခိုင်နိုင်ငံတော်ကလိုအပ်လာရေအချိန်မှာအချစ်နန့်မိသားစုအရီးထက် နိုင်ငံနန့်လူမျိုးအရီးကိုဦးစားပီးတတ်တေ တော်လှန်ရီးစိတ်နန့်နိုင်ငံတော်ကိုချစ်တေမျိုးရိုးစိုင်ဆက် အစိုင်အလာကို ကြာညို အမြဲတမ်းလေးစားဂုဏ်ယူဖို့နီစွာရာ။ ကိုအဆိုးသျှေရို့ပိုင်နိုင်ငံနန့်လူမျိုးကို အမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးရေမျိုးချစ်လူငယ်တိအများကြီးပေါ်ထွန်းလာဖို့လိုရေပိုင်ကိုယ့်ရပ် ကိုယ့်ရွာကိုစွန့်ခွာလို့အဝီးကိုရောက်နီကတ်တေလူငယ်တိအားလုံးအနီနန့်လေ့ကိုယ်တတ်နိုင်ရေဖက်ကတော်လှန်ရီးကိုအ ထောက်အပံ့ပီးနိုင် ကတ်ပြီးတော်လှန်ရီးလမ်း ကြောင်းမှန်ပေါ်
လောက်တေတော်လှန်ရီးရဲဘော်တစ်ယောက်အဖြစ်ရှင်သန်ပါလို့ ကြာညို မှာချင်ရေ။ တော်လှန်ရီးအတွက်ဓါးကောင်းတစ်လက်ဖြစ်နိုင်ပါစီကိုအဆိုးသျှေ။
တော်လှန်ရီးကို ဘေးဒုက္ခပီးရေဆူးညှောင့်ခလုတ်မဖြစ်ပါစီကေ့။ အဖိုးသျှင်ရဲ့အမွီကို ဆက်ထမ်းလို့ အဘာတူသားဖြစ်ပါစီ။
ကိုအဆိုးသျှေရို့အဖိုးသျှင်ဆိုကေလေ့ တော်လှန်ရီးနယ်ပယ်မှာ နှာမေတစ်လုံးနန့်နီခရေပိုင်ကို ရက္ခိုင့်တပ်မတော်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းရက္ခိုင့်တော်လှန်ရီးအပေါ်မှာ တာဝန်ကျီခရေသူရဲကောင်းအာဇာနီတစ်ယောက်ရာ။ဒေပိုင် ကောင်းမွန်ရေအစိုင်အလာတိကို, ကိုအဆိုးသျှေလက်းထက်မှာလေ့ကျီပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ဖို့လိုရေ။
ကိုအဆိုးသျှေကို ကြာညို မှာချင်စွာကနိုင်ငံကိုကယ်တင်ဖို့လူစွာပထမဆုံးကိုယ့်စွာကို အရင် ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့လိုရေ။ ကိုအဆိုးသျှေအိမ်မှာနီတုန်းက အိပ်ရာကထချင်ရေအချိန်ထ၊ အဝတ်အစားတိကိုလေ့ စည်းမရှိ၊ကမ်းမရှိထား။ ကြာညို နန့်ချိန်းထားကေလေ့ချိန်းထားရေ အချိန်တိုင်းရောက်မလာ။နီချင်ပိုင်နီခရေအကျင့်ဆိုးတိကိုအရင်ဆုံးဖျောက်ဖို့လိုလိမ့်မေလို့ ကြာညိုထင်ရေ။အဂုအချိန်မှာကိုအဆိုးသျှေလေ့တပ်မတော်ကချမှတ်ထားရေစည်းကမ်းတိကို
လိုက်နာကျင့်သုံးနီထိုင်တတ်တေအမိန့်ကို နာခံပြီးစည်းကမ်းကောင်းရေ၊တာဝန်ကျီပွန်ရေ ရဲဘော်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နီလိမ့်မေလို့ ကြာညို မျှော်လင့်မိပါရေ။
ဒေမှာကိုအဆိုးသျှေ……ကိုအဆိုးသျှေရို့စွာတော်လှန်ရီးအပေါ်မှာသစ္စာဟိန့်မှရာတော်လှန်ရီးကကိုအဆိုးသျှေရို့အပေါ်မှာသစ္စာဟိန့်ဖို့။တော်လှန်ရီးသစ္စာတရားနန့်ပြည့်စုံရေတော်လှန်ရီး ရဲဘော်တိရာတခြားလှုတစ်ယောက်ကိုမိမိ၏စစ်မှန်ရေတော်လှန်ရီးရင်ခုန်သံကိုအပြည့်အဝပီး အပ်နိုင်ဖို့စွာရာ။တော်လှန်ရီးရင်ခုန်သံကို စည်းဝါးကျကျမခုန်တတ်၊ တော်လှန်ရီးကိုခုတုံးလုပ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာစိတ်ဟိန့်ခကေတော့ တော်လှန်ရီးကိုဆက်မလုပ်ပါကေ့လို့ ကြာညို ပြောချင်ရေ။
နောက်ထပ်ကြာညိုပြောချင်စွာကကိုအဆိုးသျှေရို့တော်လှန်ရီးထဲမှာမ,တစ်ရာသားဆိုရေပိုင်လူမျိုးစုံ၊စရိုက်မျိုးစုံပါ လိမ့်မေလို့ထင်ရေ။ယင်းအတွက်တော်လှန်ှရီးသတိဆိုစွာခါးဝတ်ပုဆိုးပိုင်မြဲ ဖို့လိုရေ။တော်လှန်ရီးသတိတစ်ချက်လွတ်စွာနန့်ပျက်စီးလားခရေရက္ခိုင့်တော်လှန်ရီးကား မကန်ဟိလားဗျာလ်။ယင်းအတွက်ကြာညိုထပ်မှာချင်စွာကတော်လှန်ရီးသတိအမြဲဟိန့်ပါစီလို့။
ကိုအဆိုးသျှေရို့သူငယ်ချင်း၊ညီအစ်ကိုတော်လှန်ရီးမျိုးချစ်ရဲဘော်ရဲဘက်တိကိုလေ့တော်လှန်ရီးသတိမလွတ်စီဖို့ကြာညို လီးလီးနက်နက်မှာ ချင်ရေ။
ကိုအဆိုးသျှေကိုကြာညိုနောက်ထပ်ပြောချင်စွာကတော်လှန်ရီးတစ်ခုကိုလူဇာလောက်နန့်ပင် စစ၊ဇာလောက်ပင်များ များယင်းချင့်စွာကောင်းအရေးကြီးစွာမဟုတ်။အဓိကကတော်လှန်ရီး အပေါ် သစ္စာဟိန့်မှု၊ကိုယ်လုပ်နီရေအလုပ်အပေါ်သစ္စာဟိန့်မှု၊တော်လှန်ရီးကိုခေါင်းဆောင် နီရေခေါင်းဆောင်တိ၏တော်လှန်ရီးလုပ်ငန်းစိုင်အပေါ်စနစ်တကျစီစိုင်တတ်မှုဆိုရေအပေါ်မှာရာမူတည်ရေ။ယင်းအတွက် ကြာညိုပြောခရေပိုင် တော်လှန်ရီးသတိနန့် တော်လှန်ရီးသစ္စာမြဲပါစီ။
အဂုဆိုကေကိုအဆိုးသျှေလေ့တော်လှန်ရီးနယ်မြီထဲမှာအချိန်ကာလတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းပြီး ဗျာလ်ဖြစ်လို့တော်လှန်ရီး၏အတိမ်အနက်၊အဓိပ္ပါယ်၊လီးနက်မှု၊အနှစ်သာရတိကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိနားလည်သဘောပေါက်နီလိမ့်မယ်လို့ကြာညို အပြည့်အဝယုံကြည်ရေ။
ယကေလေ့…….တော်လှန်ရီးကို ကြာညို နားလည်သလောက်ပြောရဖို့ဆိုကေတော်လှန်ရီး ဆိုစွာ အခြီအနီတစ်ခုက တစ်ခုကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်စွာလို့်ကြာညိုနားလည်ရေ။ အဂုကိုအဆိုးသျှေုရို့လုပ်နီရေတော်လှန်ရီးဆိုစွာလေ့လက်ရှိ ဟိနီရေအခြီ အနီကိုပြောင်းလဲ
နောက်တစ်ခုကကိုအဆိုးသျှေရဲ့အဖိုး၊ အဘာရို့၏ မပြီးဆုံးသိမ့်ရေတော်လှန်ရီးအမွီကို ဆက်ခံစွာလေ့ဟုတ်တေ။ ကိုအဆိုးသျှေရို့လက်ထက်မှာ ရက္ခိုင့်တော်လှန်ရီးကိုအဆုံးသတ်ဖို့ လိုရေ။ ကိုအဆိုးသျှေရို့တိအဆုံးသတ်ပီးလိမ့်မေလို့ ကြာညိုတထစ်ချယုံကြည်ရေပိုင်
ရေလူအတွက်အောင်မြင်မှုဆိုစွာလက်တစ်ကမ်းအလိုမှာရာ။လက်တစ်ကမ်းအလိုကအောင်မြင်မှုတိကို,ကိုအဆိုးသျှေရို့ဆွတ်ခူးနိုင်ပါစီလို့ ကြာညိုဆုတောင်းလိုက်ရေပိုင်တော်လှန်ရီးနယ်မြီမှာ ကိုအဆိုးသျှေတစ်ယောက်အဆင်ပြေပါစီလို့်လေ့ကြာညိုဆုတောင်းပီးလိုက်တေ။
တော်လှန်ရီး အဆုံးသတ်လို့ရက္ခိုင်ပြည်သူတိလိုချင်စွာတိကိုရရေအခါ ကြာညိုပြောထားခရေ အတိုင်း သဇင်တစ်ဖက် ၊ရက္ခိုင်အောင့်လံတစ်ဖက်နန့် ကိုအဆိုးသျှေကို ကြာညိုပြောထားခရေ နီရာကစောင့်နီဖို့စွာရာ။
Tuesday , Jan 14 , 2014 . 11:25 PM
← (၅) နှစ်မြောက် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နိ စစ်ဦးစီးချုပ်မိန့်ခွန်း	မိတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုလိုက်ခြင်း →